Faaqidaadda Toddobaadka, 23 December 2016
Faaqidaadda: Abaaraha ka Jira Soomaaliya
Faaqidaadda: Kuraasta Aqalka Hoose ee Lagu Muransan Yahay
Barnaamijka Faaqidaada: Doorashooyinka Soomaaliya
Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay doorashooyinka labada Aqal ee Soomaaliya ka socda iyo tan madaxweynaha ee la filayo in dhamaadka bishan lagu qabto caasimada Soomaaliya.
Faaqidaadda: Maxaa Sababa Xagjirnimada?
Faaqidaadda: Doorashooyinka Aqalka Hoose
Faaqidaadda: Doorashadii Donald Trump
Kusoo dhawaada dhagestayaal barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo maanta ku saabsan dib u dhiska waddamada bur-burka ku yimid iyo dowlad wanaagga. Waxa barnaamijka idin la socodsiineysa Sahra Ciidle Nuur. ​
Bar: Faaqidaadda Toddobaadka
Ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, oo maanta ku saabsan doorashada la filayo inay Soomaaliya ka dhacdo iyo caqabadaha ku hor-gudban. Waxa Muqdisho ka soo diyaarisay, islamarkaasina idin la socodsiinaysa wariyaha VOA Seynab Abuukar Maxamed.
Faaqidaadda: Go'aanka Culimada ee Qoondada Haweenka